Fanamafisana ny rano haingam-pandeha Horizontal Type Double Wall Corrugated Pipe Extrusion Line - China Fihenan'ny rano haingam-pandeha Horizontal Type Double Wall Corrugated Pipe Extrusion Line Supplier, Factory –Jwell
● Ny habeny vita amin'ny habe dia vita amin'ny firaka aliminioma, ary ny atiny tsy mahazaka akanjo. Ny fantsom-pandrefesana fantsona dia azo isaina amin'ny alàlan'ny programa rindrambaiko manokana, ary ny hamafin'ny peratra dia azo raisina amin'ny lanjany mitovy.
● Ny rano mangatsiaka dia atsindrona amin'ny fizarana miverina sy miverina (ny modely toy izany eny an-tsena dia asiana rivotra sy tsy misy rano).
● Ny milina mamolavola dia manana rafitra manokana hampihenana tsara ny fiparitahan'ny fantsona (miaraka amin'ny fiarovana ny patanty).
● Ny masinina mamolavola dia manana rafitra manokana hanakanana tsara ny fiakarana ary hahazoana antoka fa tsy ho simba ilay modely (miaraka amin'ny fiarovana ny patanty).
● Ny lampihazo dia manana fitaovana fitarihana, izay afaka mahatsapa ny fidirana miaraka amin'ny lasitra.
● Ny fahamendrehan'ny banga dia azo hatsaraina amin'ny alàlan'ny boaty banga ao amin'ilay milina fanoritana.
● Ny masinina mamolavola dia misy famatsian-kery nomaniny ho solon'izay afaka miantoka ny fisintomana milamina ny fitaovana amin'ny toeran'ny famokarana raha sendra tsy fahombiazan'ny herinaratra tampoka hisorohana ny fanidiana
● Ny firafitra manokana amin'ny fitoeran-drano dia afaka miantoka ny rano mihetsiketsika mikoriana ao anaty mody (miaraka amin'ny fiarovana ny patanty).
● Ny fihetsiky ny zana-kazo ambany sy ny endriny ambony dia ahitsy amin'ny herinaratra avokoa.
Type Pipe habe (mm) Max.Speed ​​(m / min) Herin'ny fahefana (KW)
Jwell orinasa dia iray amin'ireo lehibe indrindra mpanamboatra milina extrusion plastika eto amin'izao tontolo izao. Ny fototry ny famokarana ny orinasa Jwell mandrakotra tokony ho 700,000 metatra toradroa ary misy 6 fototra famokarana, izay hita ao amin'ny tanànan'i Shanghai izay ny foiben'ny orinasa locates, Zhoushan City ao amin'ny faritanin'i Zhejiang, Taicang City sy Liyang City ny Jiangsu Province, Tanànan'i Haining ao amin'ny Faritanin'i Zhejiang sy Tanànan'i Dongguan ao amin'ny Faritanin'i Guangdong. Manana mpiasa maherin'ny 3000 ny orinasa, teknisianina 480 eo ho eo ary mpiasan'ny fitantanana eo amin'izy ireo. Ary noho ny fikarohana sy ny fampandrosoana vondrona avo lenta, za-draharaha elektrônika sy mekanika injeniera, mandroso machining fototra sy mahafeno fepetra atrikasa ny orinasa, dia mivarotra mihoatra ny 2500 mandroso extrusion tsipika isan-taona ary manondrana any amin'ny firenena 100 mahery.
1. Ny fe-potoana antoka dia 1 taona ary ny serivisy dia misy mandritra ny androm-piainana. Ny vidin'ny kojakoja simba dia hiantoka ny mpividy, fa mandritra ny vanim-potoana antoka, ny vidin'ny kojakoja simba dia hiantoka ny mpivarotra, afa-tsy ny kojakoja mora tapaka sy ny kojakoja simba noho ny antony maha-olombelona.
2. Ny manam-pahaizana dia hamaly ny fanontaniana rehetra ao anatin'ny 24-48 ora ary ho voavaha haingana araka izay tratra
3. Afaka mandefa injeniera any amin'ny orinasa JWELL anay ny mpividy mba hiofana
4. Izahay dia manome ny antontan-taratasy ara-teknika feno sy ny sary mifandraika amin'ny singa elektrika amin'ny teny sinoa sy anglisy
5. Handefa teknisiana ampy ho any amin'ny orinasan'ny mpividy izahay amin'ny fametrahana sy fametrahana milina.Ny vidiny nateraky ny teknisianina mpivarotra ao amin'ny firenen'ny mpanjifa (anisan'izany ny tapakila fitsangatsanganana eo anelanelan'i Shina sy ny firenena mpividy, fifamoivoizana an-tanety, saram-pitsaboana, trano fandraisam-bahiny, sakafo hariva ary sns) dia ho saron'ny mpividy